Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language for Android - APK Download
Home » Apps » Books & Reference » Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language
Using APKPure App to upgrade Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language, fast, free and save your internet data.
The description of Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language App
🔶 နိုင်ငံတကာမှာ တစ်နှစ်ကို စာအုပ်အသစ် ၁၀၀၀၀၀+ ကျော်ထွက်ပါတယ်။
🔶 ဒီနေ့ခေတ်မှာ အလုပ်တွေများလာတာကြောင့် စာအုပ်တွေကများပြီး စာဖတ်ချိန်ကလဲ နည်းလာပါပြီ။ ဒီတော့ ဒီလောက်များတဲ့ စာအုပ်တွေထဲကနေ ကိုယ့် အတွက် အသုံးဝင်မဲ့ အနှစ်သာရတွေကို အချိန်တိုအတွင်း ရွေးချယ်ဖတ်ရှုနိုင်ဖို့ အရေးကြီးလာပါတယ်။
🔶 ဒါကြောင့် ShweNote က နိုင်ငံတကာမှာ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး သုတစာအုပ်တွေရဲ့ အနှစ်ချုပ် အဆီအနှစ်တွေကို၊ ပြေပြစ်ရှင်းလင်းတဲ့ မြန်မာစကားနဲ့ တင်ဆက်ပေးထားပါတယ်။
🔶 ShweNote application ကို Android မှာရော၊ IOS မှာပါ ဒေါင်းလုပ်ရယူပြီး၊ ဖုန်းထဲမှာတင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
▪️အချိန် ၁၅-၃၀ မိနစ်လောက်နဲ့ စာအုပ်ထဲက အဓိကအချက်တွေကို သိရှိနိုင်တဲ့အတွက် အလုပ်များနေလဲ စာဖတ်လို့ရနိုင်မယ်။
▪️စာဖတ်ဖို့ မအားတဲ့ အချိန်တွေမှာ အသံထွက်စာအုပ်တွေ နားထောင်ပြီး သင်ယူလေ့လာနိုင်မယ်။
▪️အင်တာနက်မရှိတဲ့ အချိန်မှာလဲ Offline download mode နဲ့ ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်မယ်။
▪️မြန်မာဘာသာနဲ့ ဖတ်ရှုလို့ရတာကြောင့် အချိန်တိုအတွင်း လွယ်လွယ်ကူကူ ဖတ်ရှုနိုင်မယ်။
▪️အင်္ဂလိပ်စာ တတ်စရာမလိုပဲ နိုင်ငံတကာ ဗဟုသုတတွေ ရှာမှီးနိုင်မယ်။
▪️ကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေကို လွယ်လွယ်ကူကူ ရွေးချယ်နိုင်လာမယ်။
▪️စာအုပ်တစ်အုပ်လုံး ဖတ်ပြီးကာမှ ဘာရေးထားမှန်း မသိလိုက်တာမျိုး မရှိတော့ဘူး။
▪️စာတစ်အုပ်ကို အဆုံးထိ မဖတ်နိုင်ပဲ လပေါင်းများစွာ ကြာနေတာမျိုးလဲ မရှိတော့ဘူး။
▪️Epub Reader ကိုအသုံးပြုထားလို့ ဘယ်လို Device မှာမဆို အကောင်းဆုံး စာဖတ်အတွေ့အကြုံကို ခံစားနိုင်မယ်။
🔹Business and Management
🔹Sales and Marketing
🔹Motivation and Happiness
🔹History and Politics
🔹Education and Learning
🔹Parenting and Relationship
🔹Personal Development (Success)
🔹Health and Food
Learn the key lessons of Non-fiction books in 15 - 30 Minutes.
There are over 100000+ books publishing every year. So, How to Read all of these books Faster? In our world today, we are often too busy to finishabook. ShweNote offeringafresh way of learning, and to promoting universal access to knowledge.
ShweNote summarizes the key ideas of the world’s bestselling books in Myanmar Language. You can remove your language barrier with ShweNote.
🔹Top Quality Summarized Books
🔹Offline Download Mode
🔹Powerful EPUB Reader
🔹Weekly New Books
🔹Weekly Free Book
ShweNote is the first book summary app in Myanmar. You can read International Best Selling Books in just 15-30 minutes.
Our team consists of passionate members with various educational backgrounds. Our mission is to introduce the world's best selling books to Myanmar People. We hope our effort can support to build the better country.
COPYRIGHT NOTICE: Some of the contents and book covers are loaded from public sources.
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language App 2.0.3 Update
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language Tags
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 2.0.3 (22)
App uploaded by: Phyo Phyo
File SHA1: 11110860426f88954749e8e4ebe5e01f2dd0a412
V2.0.2 61.3 MB APK
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 2.0.2 (21)
File SHA1: 588f5f166b16b86dd0456353527a7c0f459d9fa9
V2.0.1 61.0 MB APK
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 2.0.1 (20)
File SHA1: e16bacf450b41c4dc10735f35eb2ce1b1ae813f4
V1.3.0 28.2 MB APK
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 1.3.0 (11)
File SHA1: 64803031aada18e667b6d995bcd67f3b0f0c22df
V1.2.1 30.4 MB APK
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 1.2.1 (10)
App uploaded by: Angel Delgadillo
File SHA1: ce3a7a6470d2f5a5a2e8815a24343a29804a7fbf
Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language 1.2 (8)
File SHA1: 6744d4b92dfc68e68565150a1d2282e2c329eda5
Similar to Shwe Note: Key Ideas of Books in Burmese Language